अनुहारमा कोठी छ ? घरेलु उपायबाट यसरी हटाउनुस् (टिप्ससहित) « Lokpath
२०७६, १४ भाद्र शनिबार १५:०९
अनुहारमा कोठी छ ? घरेलु उपायबाट यसरी हटाउनुस् (टिप्ससहित)
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ भाद्र शनिबार १५:०९
काठमाडौं | तपाईको गालामा गोठी छ कोठीलाई जोडेर सम्बन्धित व्यक्तिको प्रवृत्ति, भाग्य केलाउने गरेको पक्कै सुन्नु भएको होला । नाकमा कोठी हुनेको यस्तो भाग्य आँखामा हुनेको यस्तो भन्ने भनाईहरु पनि बाक्लै सुनिन्छन् । हुन त अनुहारमा ठिक ठाउँमा एउटा बढीमा दुईटासम्म कोठी राम्रो देखिन्छ । एकदमै धेरै कोठी आए भने चाहिँ भद्धा देखिन थाल्छ । आफ्नो सौन्दर्यम चित्त नबुझेर महिलाहरु कोठी हटाउन लेजर सर्जरी पनि प्रयोग गर्छन् । यो एकदमै महंगो पर्न जान्छ । विकिपिडीया लेख्छ मानिसको छालामा आउने काला वा अन्य रंगका दानालाई कोठी भनिन्छ र हामिले बुझ्ने कोठी भनेको छालालाई रङ्ग प्रदान गर्ने कोषिका एकै ठाउँमा थुप्रिएर रहने अवस्था हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा मोल भनिन्छ । धुलिखेल अस्पतालमा छाला रोग विभागमा १० वर्षयता विभिन्न किसिमका लेजर प्रविधि प्रयोग हुँदै आएका छन्। अनुहारबाट मुसा वा कोठी हटाउन केहि आयुर्वेदिक उपचार पनि छन् ?
-एलोबेरा जेलको प्रयोग गरी मुसा तथा कोठी हटाउन सकिन्छ ।
-कपास भिनेगरमा डुबाएर मुसामा लगाई १५ मिनेटपछि मनतातो पानीले अनुहार धुन पनि सकिन्छ । नियमित रुपमा यसो गर्दा कोठी र मुसा गायब हुन्छन् ।
-लसुनको पोटी बिचबाट काटेर कोठी वा मुसामा रगड्नुपर्छ । नियमित रुपमा यसो गर्दा कोठी र मुसा आफै हटेर जानेछन् ।
-बरको पातको रस मुसा र कोठीको उपचारका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसबाट छाला मुलायम हुन्छ र मुसा र्झछ । चौतारमा सुस्ताउन पुग्दा बरको पात संकलन गरी यो विधी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । कपासको उनलाई प्याजको रसमा भिजाएर कोठी र मुसामा लगाउँदा पसिन कोठी कम हुँदै जान्छ ।
राति सुत्नुभन्दा अगाडि बेकिङ सोडा कोठी र मुसामा लगाउँदा पनि यो हटेर जान्छ ।
-भद्धा देखिएको कोठी हटाउनको लागि अमिलो दहीले १० देखि १५ मिनेटसम्म मसाज गर्ने र अनुहार धुने गर्नुपर्छ ।
-ग्लिसरिन र गुलाब जलको नियमित प्रयोग अनुहारको चमक र कोठी गायब गराउने अचुक औषधी हो ।
-अनुहारको कोठी हटाउनका लागि काँचो आलुको टुक्राको प्रयोग पनि राम्रो मानिन्छ । यसले अनुहारमा निखार देखिन्छ । ।
-केराको बोक्राको भित्री भाग कोठीमा राखि माथिबाट सफा कपडाले बाँधि रातभरि त्यत्तिकै राख्ने विधी नियमित गर्दा कोठी आफैं झर्छ ।
-अनुहारभरि कोठी फैलिएको छ भने भुइँकटहरको जुस दिनको दुईतीनचोटि त्वचामा लगाउँदा पनि कोठी जान्छ ।
-राति सुत्नुअघि अनुहारमा स्याउको झोलले हलुका मसाज गरी रातभरि त्यत्तिकै राख्दा पनि यो हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
-हरियो धनिया पिसेर लगाउँदा पनि मुसा नरम भएर झरेर जान्छ ।
-कोठीको उपचारका लागि अमिलो दहीले १० देखि १५ मिनेटसम्म मसाज गर्नुपर्छ ।
–मुसामा नेलपोलिस लगाएर केही बेरपछि सफा गर्ने । दिनमा २ ३ पटक यसो गर्दा मुसा झर्नेछ
-अलिकति मह र सनफ्लावरको तेल मिसाएर नियमित कोठीमा लगाउँदा पनि यो रम्रो हुन्छ ।
नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती
विकिपिडीया नेपाली शब्दकोशले लेखेको छ अनुहारको पोतो, कोठीले हैरान भएकालाई रातारात सफा गर्नुपर्ने हतारो हुन्छ । यस्तो फोहोर हटाउन कतिपयले लेजर प्रविधि प्रयोग गर्छन् । यो तरिकाले पोतो हटाउँदा छालाको नदेखिने बाहिरी पत्रसमेत फालिने गर्छ । छालाको पत्र जानु नै ठूलो गल्ती हो । पुरानो छाला फालेपछि नयाँ लेयर देखा पर्छ र यो निकै संवेदनशील हुन्छ । नयाँ लेयर विकसित हुन कम्तीमा २८ दिन लाग्छ । यो अवधिमा संवेदनशील छालामा घाम र फोहोरको असर बढी पर्न जान्छ । आफूलाई सुरक्षित गर्न नसकेपछि संवेदनशील छालामा झनै पोतोलगायतका समस्या बढी देखिने खतरा रहन्छ । त्यसैले क्षणभरका लागि होइन, दीर्घकालका लागि समस्याको समाधान खोज्न मेलानिनलाई स्थिर राख्ने उपाय नै अपराउनु उत्तम हुन्छ ।
सन प्रोटेक्सन क्रिमको नियमित प्रयोग तथा बाहिर निस्किँदा छाता ओढ्ने, टोपी र सनग्लास लगाउने गर्नुपर्छ । घरभित्र बस्दा र बाहिर जाँदा सनप्रोटेक्सन क्रिम लगाउनै पर्छ । यसो हुँदा छालामा तिलकोठीले सताउन पाउँदैन ।
यो छुटाउनु भयो की ?
पटक–पटक हाच्छ्युँ आउनुको यस्तो रहेछ कारण
हाँस्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव, तपाइँ कस्तो हाँस्नुहुन्छ
शारीरिक सम्बन्धको विषयमा महिलाहरुले सोच्छन् यी १० अनौठा कुरा
यसकारण साउन महिनामा भुलेर पनि मासु र रक्सि नखानुस् !
होसीयार १ खाली पेटमा नखानूस् यी खानेकुरा, विष बन्न सक्छ
प्रेसर लो भएका व्यक्तिहरुले खानुहोस् यी १० खानेकुरा
सेक्सबाटै निको हुन्छन् यी ५ रोग !
शारीरिक सम्बन्धको विषयमा महिलाहरुले सोच्छन् यी १० अनौठा कुरा https://www.lokpath.com/story/177861
विवाहित महिलाप्रति पुरुष आकर्षित हुनुको कारण यस्तो १
प्रेममा निकै बफादार हुन्छन् यस्ता युवती, तपाई पर्नुहुन्छ ?
तपाईंलाई याद छ रु विवाहपछि युवतीमा देखिन्छ यस्तो परिवर्तन
यस्ता व्यक्तिहरुले पटक्कै पैसा बचाउँन सक्दैनन् https://www.lokpath.com/story/177730
तपाईलाई फेसबुकमा कसले अनफ्रेन्ड गर्यो थाहा छ रु यसरी थाहा पाउन सकिन्छ
प्रेसर जाँच गर्दै हुनुहुन्छ रु जाँच्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु यस्ता छन्, थाहा पाइराखौं
यी ८ व्यक्तिले भुलेर पनि मेवा खानु हुँदैन, जानी राखौं
यौनसम्पर्कपछि के चाहन्छन् महिलाहरु, जानी राखौं
हस्तमैथुन गर्नुका फाइदाहरु यस्ता छन्, जानी राखौं
यी अंगमा सुन भुलेर पनि लगाउनु हुँदैन, यस्तो छ कारण
यी ५ किसिमका रोगीले भुलेर पनि लसुन नखानुस्
यी ४ राशि भएका मानिससँग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ, तपाई नि पर्नुहुन्छ की
नेपाली महिलाहरु बत्ति बालेर यौनसम्पर्क गर्न नचाहनुको कारण यस्तो
कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ रु जान्नुहोस्